IVilla Iyathengiswa Esethalalini, e-Ahmedabad
Real Estate Listings: » Residential homes » Villas » IN » Gujarat » Ahmedabad » Satellite » IVilla Iyathengiswa Esethalalini, e-Ahmedabad1
Impahla engu-4 bhk iyatholakala ukuthengiswa eSatellite, e-Ahmedabad. Indlu inefenisha encane. Impahla ifaka i-1 tv, ifriji eyi-1, usofa o-1, umshini wokuwasha o-1, itafula lokudlela eli-1, ukuxhumeka kwegesi oku-1, i-1 ac nombhede o-1. Umnyango wayo omkhulu ubheke ohlangothini olusenyakatho. Kuyisakhiwo esilungele ukuhamba. Kwenziwa ngendlela yokunikeza abahlali impilo ethokomele.